Yakachipa Semi-nyoro Zvinhu Kupwanya Muchina weOrganic Fertilizer Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Iyo Semi-nyoro Organic Fertilizer Uchishandisa Crusher ine yakafara mwando mugove unosvika pa25% -55% yezvinhu zvakaviriswa zvekugadzirwa. Muchina uyu wagadzirisa dambudziko rekupwanya rehupenyu nehunyoro hwakanyanya, ine yakanyanya kupwanya mhedzisiro pazvinhu zve organic mushure mekuvira.
Chii chinonzi Semi-nyoro Chinyorwa Kupwanya Muchina?
Iyo Semi-nyoro Chinyorwa Kupwanya Machine inyanzvi yekupwanya michina yezvinhu zvine hunyoro hwakanyanya uye yakawanda-fiber. IyoKumusoro Moisture Fetiraiza Kupwanya Machine adopts maviri-Danho rotors, zvinoreva kuti ane kumusoro uye pasi maviri-Danho unorema. Kana iyo mbishi yakadyiswa kuburikidza neyekumusoro-padanho rotor yekukanganisa kukuya, uye yozoendeswa kune yakaderera-danho rotor kuti uenderere kukuya kuita hupfu hwakatsetseka kusvika kune akanakisa esimbi size yeinotevera granulating maitiro. Iko hakuna sefa mesh pazasi pe Semi-nyoro Chinyorwa Kupwanya Machine. Saka zvinyoro nyoro zvinogona kupwanywa uye kusambovharwa. Kunyangwe zvinhu zvakangotorwa kubva mumvura zvinogona kupwanywa, uye hapana kunetseka pamusoro pekuvharika kana kuvharwa. Iyo Semi-nyoro Chinyorwa Kupwanya Machine inonyanya kushandiswa mukugadzira nekugadzirisa fetiraiza yemuchadenga, ine maitiro akanaka pazvinhu zvakagadzirwa senge manyowa ehuku uye humic acid.
Chii chinonzi Semi-wet Material Crushing Machine inoshandiswa?
Semi-nyoro Chinyorwa Kupwanya Machine inoshandiswa kupwanya zvipenyu organic manyowa ekuvirisa, iyo yemadhorobha epamba marara manyowa yekuvirisa, huswa madhaka kabhoni, yekumaruwa marara, maindasitiri organic manyowa ehuswa, kuberekesa zvipfuyo uye huku manyowa uye zvichingodaro.
Chinhu cheSemi-nyoro Chinyorwa Kupwanya Machine
1.Rotor yeiyo Semi-nyoro Chinyorwa Kupwanya Machine kuvaka kunotora zvine musoro dhizaini & chimiro. Iine mashizha maviri-deck, kugona kwayo kupwanya kwakapeta zvakapetwa semimwe michina inopwanya. Izvo zvinhu zvinopinda muchikamu chinopwanya kubva mugomba rekudyisa, zvobva zvapwanywa kuita hupfu hwakatsetseka.
2.Inotora yakakwira-chiwanikwa yakaoma-yakapfeka sando. Iyo sando zvidimbu zvakaumbirwa kuvimbisa kuti dzakasimba uye dzakaomarara-dzakapfeka zvakakwana kuti dziwedzere hupenyu hwebasa.
3.Rack yeiyi fetiraiza grinder yakasungwa neakakwira kabhoni simbi ndiro uye bhokisi simbi. Iyo inopfuura yakaoma kugadzirwa kuenderana chitupa & yakatarwa tekinoroji zvinodiwa.
4. Iyo Semi-nyoro Chinyorwa Kupwanya Machine yekutengesa ine maviri akatsemura ekugedza masisitimu ekupwanya izvo zvigadzirwa zvakapfava uye kuwana yakakwana optimum kushanda.
5.Kutora inoshanduka bhandi dhiraivha. Iyo mota yemagetsi inotyaira bhanhire sheave iro rinoendesa simba kune rakakosha axis, richiita kuti itenderere mune yekumhanya mhanya kupwanya izvo zvigadzirwa.
Zvakanakira Semi-nyoro Zvinhu Kupwanya Machine
1) Wide chikumbiro uye yakakwirira rakavimbika. Muchina uyu hauna pasi nechidzitiro, saka zvinopfuura zana mhando yezvinhu inogona kupwanywa uye muchina hauzombodzivharwa.
2) Nyore kugadzirisa. Muchina uyu unoshandisa maviri-nzira gira tekinoroji. Kana sando yapera, sando inogona kushandiswa zvakare mushure mekufambisa nzvimbo yayo.
3) Zvakanaka kupwanya mhedzisiro. Muchina unoshandisa iwo maviri-danho rakapurwa rotor, uye icho chinhu chekutanga chinopwanywa kuita zvidimbu zvidiki ndokuzopwanywa kuita guruva rakanaka.
4) Basa rekuchengetedza basa, uye oparesheni iri nyore. Iyo inoshandisa tekinoroji yepamusoro, munhu mumwe chete ndiye anokwanisa kushanda zviri nyore, kwete chete yakachengeteka uye yakavimbika, asi zvakare inogonesa kugadzirisa.
Semi-nyoro Zvinhu Kupwanya Machine Machine Show
Semi-nyoro Zvinhu Kupwanya Machine Model Sarudzo
Particle Kukura (mm)
Huwandu hwePfupi Nyundo
130x50x5 = zvidimbu makumi manomwe
130x50x5 = zvidimbu makumi maviri nezvina
180x50x5 = 32 zvidimbu
300x50x5 = zvidimbu makumi manomwe nezviviri
Huwandu Hurefu Nyundo
180x50x5 = zvidimbu makumi matatu
240x50x5 = zvidimbu makumi mana nemasere
350x50x5 = zvidimbu makumi mana nemasere
Kureba × upamhi × kukwirira
Pashure: Kaviri Screw Inoburitsa Granulator
Zvadaro: Vertical Chain Fertilizer Crusher Machine